"Ary nisy mpanapaka anankiray nanontany Azy hoe : Mpampianatra tsara ô, … Fa hoy Jesosy taminy : Nahoana Aho no ataonao tsara ? Tsy misy tsara afa-tsy Iray ihany, dia Andriamanitra." Lioka 18:18,19
"Fa rehefa niseho ny fahamoram-panahin’Andriamanitra, Mpamonjy antsika, sy ny fitiavany ny olona, dia … araka ny famindrampo … no namonjeny antsika." Titosy 3:4,5
"Miderà an’i Jehovah, fa tsara Izy." Salamo 136:1
Ny olona naneho hatsarampo tamintsika dia tsy mora hadino. Ny olona mitsiky am-pitiavana, mifantoka mihaino, vonona hanampy… dia mampahery sy mampitraka.
Izany no toetra hitan’ireo mpiara-belona tamin’i Jesosy tao aminy, hany ka ny iray tamin’ireo aza dia niantso Azy hoe: “Mpampianatra tsara”. Ny valinteniny kosa anefa dia misarika antsika hahamarika fa tsy misy olona azo atao hoe tsara. Ny fahamoram-panahy marina, tena izy, maharitra, dia Andriamanitra irery ihany no manana azy. Niseho miharihary izany, fony Jesosy tonga tetỳ an-tany. Na inona na inona niseho, na nitombo aza ny fanoheran’ny olona Azy, nefa ny hamonjy azy ireo no nahatongavany, dia “nandehandeha nanao soa” Izy (Asan’ny Apostoly 10:38). Ary teo amin’ny hazofijaliana, raha niaritra fanaintainana lozan-tany Izy, dia mbola nataony ho zava-dehibe ny hanankina ny reniny tamin’ny mpianany iray (Jaona 19:27) sy hangataka tamin’Andriamanitra Rainy mba hamela ny helok’ireo namono Azy (Lioka 23:34).
Raha tsapanao ny hangazan’ity tontolo tsy mitsitsy anao ity, dia vakio ny Filazantsara mba hahitanao ny fahamoram-panahin’i Jesosy Kristy, Ilay “Zanak’Andriamanitra, Izay efa tia ahy ka nanolotra ny tenany hamonjy ahy” (Galatiana 2:20). “Andramo ka izahao fa tsara Jehovah ; sambatra izay olona mialoka aminy” (Salamo 34:8).
Isika kristiana kosa, aoka tsy hiahiahy na oviana na oviana ny amin’ny fahamoram-panahin’Andriamanitsika, ary aoka tsy hanadino ny hankalaza izany. Aoka koa isika hiezaka hanahaka bebe kokoa hatrany Ilay ohatra ho antsika. Ny hatsarampon’ny olona no manintona ao aminy. Aoka ny fitondrantenantsika no hampitsiry ao am-pon’ireo manodidina antsika, faniriana hahalala bebe kokoa ny fahamoram-panahin’Andriamanitra.